April 24 zinglei 6:00 AM ah Min Aung Hlaing Indonesia ram ahazuang lai – Hakha Cherry
April 24 zinglei 6:00 AM ah Min Aung Hlaing Indonesia ram ahazuang lai
ASEAN Summit meeting ah SAC lutlai Min Aung Hlaing cu Myanmar Airways International (MAI), MMA No. 001 in Indonesia ram khuapi Jakarta ahazuang lai, tiasi.
Cu hlan Myanmar ram upa deuh khual an tlawn (ramleng chuah) tik ah Myanmar National Airline (MNA) deuh in khual an tlawng tawn nain tutan Min Aung Hlaing cu MAI inatlawng lai.
“MAI ah hin Myanmar rammi Vanlawng lei riantuan Officer rank minung an tam pin ah ralkap chungkhar in Philippines ram ah Vanlawng lei sianginnakai mi an tam i MAI ah rianaluut mi an tam ca ahasi,” tiah riantuan bal mi pakhat nihachim.
“Hramhram in nawlngeihnak latu Min Aung Hlaing hi ramlengachuah lecangka tlaihcolh dingasi,” tiah Global Centre of R2P in Executive Director Dr. Simon Adams niharak chim bal. Cun, NUG in Home Affairs and Immigration Minister U Lwin Ko Latt zong nih INTERPOL (Vawlei cung Sualphun ngan hlathlaitu Palek) nih tlaihpiak ding in General Secretary sin ah caakuat ve fawn.
KhitThitMedia The Hakha Times
စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင် မနက်ဖြန် မနက် ၆ နာရီမှာ အင်ဒိုနီးရှားသို့ မည် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်မည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် MAI လေကြောင်းလိုင်း၊ လေယာဥ်အမှတ် MMA001 ဖြင့် ဧပြီလ ၂၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၆ နာရီတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာသို့ ထွက်ခွာမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ယခင်က နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများသည် နိုင်ငံတကာသို့ ထွက်ခွာရာတွင် Myanmar National Airline ကို အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ယခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ MAI လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် သွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ MAI လေကြောင်းလိုင်းတွင် လေတပ်မှ အရာရှိများက နေရာအများစုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသလို စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းမိသားစုမှလာသော သူအချို့ကလည်း ဖိလစ်ပိုင်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ လေကြောင်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်သောကျောင်းများတက်ပြီး MAI တွင် အလုပ်ဝင်လုပ်နေတယ်လို့ ဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးမှ ခေတ်သစ်မီဒီယာကို ပြောသည်။
အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ စစ်ကောင်စီမှ ကျူးလွန်နေခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုများကြောင့် အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင် နိုင်ငံပြင်ပကို ထွက်ခွာတာနဲ့ ဖမ်းဆီးအရေးယူသင့်တယ်လို့ Global Centre of R2P ဒါရိုက်တာ ဆိုင်မွန်အဒမ်စ် မှ ပြောထားသည်။ အလားတူ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှလည်း အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းဆီးဖို့ INTERPOL ကို စာပို့အကြောင်းထားပြီးလည်း ဖြစ်သည်။
photo – MMA001 လေယာဥ် ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။
Tahtone khua ah lamazawh mi hna meithal inakaptu ralkap pali cu KNU nih an kah ve hna i pahnih an thi, pahnih hliam hma he an zaam
CNO/CNDFaSupport lomi hna hi,Kalamyo area i,a um lomi le harnakatong lomi leathei lomi lawngte nan si.